Heerarka Lacagta | FXCC
Home / Trading / Qalabka Forex / dulsaarka
Heerka dulsaarka suuqyada ee bangiyada dhexe ayaa saameyn weyn ku yeelan kara waxqabadka ganacsiga. Jadwalkan waxaan bixinay liis dhamaystiran oo ku saabsan dhammaan sicirka aasaasiga ah, oo la xiriirta dhammaan bangiyada dhexe ee caalamiga ah.
Haddii isbeddelka isbeddelka lagu dhawaaqo, tusaale ahaan, mid ka mid ah afarta shirkadood ee dhexe ee dhexe: ECB, Bank of Japan, The Fed iyo Bank of England ee England, ka dibna wax ka beddelka ayaa si wayn u saameyn kara waxqabadka lamaanaha lacagta.
Tusaale: Aynu sheegno in Fed ay muujinayso 0.25 boqolkiiba dakhliga dulsaarka ah ee Maraykanka, ka dibna dakhliga ayaa kor u qaadi doona garabkiisa iyo qaar badan oo ka mid ah asxaabteeda yaryar. Maalgashadayaashu waxay ku laaban doonaan dollarka iyada oo la go'aaminaayo in ay bixiso dulqaad wanaagsan oo ah dano maalgelin.
Marka la eego shuruudaha fudud, haddii aad heleyso 0.5% oo dulsaar ah koontada kaydka, ka dibna lagu maalgeliyo doolar, marka la eego wadada Maraykanka ah ee lagu kaydiyo dollar-ka kaydka 0.75%, waxaa loo arkaa in uu yahay mid qiimo leh oo laga yaabo inuu cadeeyo maalgashi faa'iido leh .
Waxa kale oo jira tixgelin kale oo la xidhiidha heerarka asaasiga ah ee bangiyada dhexe, tusaale ahaan, fursadda laga faa'iidaysto waxa loo yaqaan "fursadaha ganacsiga".
Cilmi-qaadku wuxuu qabanayaa ganacsiga waa istaraatijiyad maalgaliye ah oo iibiya lacag gaar ah, oo leh dulsaar dakhligeedu hooseeyo oo isticmaalaya lacagaha lagu iibsado lacag kale, taas oo keenaysa dulsaar sare. Ganacsade isticmaalaya istaraatiijiyadan waxay isku dayaysaa in ay qabato faraqa u dhexeeya qiimaha. Farqigaasi badanaa wuxuu noqon karaa mid la taaban karo, iyada oo ku xidhan heerka naqshadaynta. Waxaanu aragnaa tusaalooyin sahlan ee ganacsiga qaadashada markasta suuqa; haddii aan u maleyno in dollarku kor u kici doono euro, markaa waxaan dhumin doonaa EUR / USD.
Iyadoo aan loo eegin faa'iidooyinka muddada gaaban ee la heli karo sida baanka dhexe ee dulsaarka dulsaarka ayaa la adeegsadaa, guulaha muddada dheer, maalgashadayaasha inta badan loo arko inay yihiin "ganacsatada suuqyada", ama "macaamil ganacsade" waxay aad u nugul yihiin heerka sicirka dulsaarka go'aaminta bangiyada dhexe. Noocyada ganacsatada takhasuska ah waxay kaliya ku wareegi karaan ama ay qabanayaan jadwalkooda muddada dheer ee labada lamaane oo kala duwan, marka la eego isbedelka dulsaarka dulsaarka. Waxaa laga yaabaa in ay ku dhejiyaan dhowr ganacsi sanadkiiba, oo kaliya ganacsiga marka bangiga dhexe uu badalayo heerka dulsaarka.
Hesho sicirka bangiga dhexe